'डा. ओली'को पार्टीमा 'झाँक्री'हरु सामाजिक सञ्जालमा, जनवाद कोमामा
काठमाडौं, ८ साउन । कुनै समय थियो– नेकपाका नेता/कार्यकर्ता आफ्नो पार्टी विधि र पद्धतिमा चल्ने पार्टी होे भन्ने दाबी गर्थे । नेताप्रधान हैन, नीतिप्रधान पार्टी हो भन्ने दाबी गर्थे । कम्युनिष्ट पार्टी गुटगत स्वार्थमा नचल्ने दाबी गर्थे । पार्टी अन्तसंर्घर्ष वैचारिक हुने दाबी गर्थे ।
यस्तो सोच राख्ने दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेता, कार्यकर्तालाई पार्टीको पछिल्लो स्थितिले निराश बनाएको छ । पार्टीका उपल्ला तहका नेताहरुको व्यवहार उनीहरुलाई मन परेको छैन । उनीहरु पार्टी नेताहरुको क्रियाकलापको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने अवस्थामा देखिन्न । तर, खुलेर बोल्न पनि सकिरहेका छैनन् ।
पार्टीको पछिल्लो शक्तिसंघर्षमा न उनीहरुको कुनै संलग्नता र सहभागिता छ, न उनीहरुको धारणा के छ भनेर कसैले सोधपुछ नै गरेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा जेजे हुँदैन भनिन्थ्यो, अहिले त्यहीत्यही भइरहेको छ ।
पार्टी बैठक विधान र नियमावली अनुसार भइरहेको छैन । विधि र पद्धतिको स्वतः हराएको छ । गुटगत गतिविधि तीव्र छ । पार्टीको औपचारिक तथा संस्थागत प्रक्रियाको पालना कसैले गरेको छैन । स्थायी समिति बैठक ८औं पटक स्थगित भई अनिश्चित बन्न पुगेको छ । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष नै अनुपस्थित भइदिने गज्जबको नयाँ दृष्य देखापरेको छ ।
नीति हराएको छ । नेता प्रधान भएका छन् । नेताहरु एकपछि अर्को कोठे बैठक गरिरहेका छन् तर परिणाम भने शून्य । युवा भनिएकोे पुस्ताले यो स्थितिमा कुनै सृजनात्मक हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । उनीहरुलाई कसैले भाउ दिएको, उनीहरुको कुरा सुन्न बुझ्न खोजेको पनि छैन ।
नेकपाको नयाँ पुस्ताको काम अहिले मनमनै मुर्मुरिने, पार्टी अनुशासनको डरले सामाजिक सञ्जालमा अलिअलि असन्तुष्टि पोेख्ने चुप बस्ने बन्न पुगेको छ । यस प्रयोजनका लागि धेरै ट्वीटर प्रयोग गरेका छन् ।
यसरी मुर्मुरिनेमा युवा नेत्री तथा सांसद रामुकमारी झाँक्री सबैभन्दा अगाडि छिन् । उनको एउटा ट्वीट निक्कै विवादास्पद बनेको छ । उनले भनेकी छन्, ‘इस्कियाको अपार सफलतापछि आएको राम नेपाली कथानाक चलचित्र ठोरीको अयोध्या दर्शकले खासै रुचाएनन्, दुई दिनमै उत्रियो । महाधिवेशन मंसिरको पटकथा खासै जमेन । अब जबज रिलिज हुँदैछ, हेरौं दर्शकको मन कति जित्न सक्छ ?’
उनले अर्को अझ कडा ट्वीट गरेकी छन् । भनेकी छन्, ‘भावर दुन प्रदेश भनेर भूगोलमा पढ्थ्यौं । त्यस प्रदेशका विभिन्न बिशेषतामध्ये भावरको कोब्रा खतरनाक हुन्छ । कि त टाउकोमा हानेर खुत्रुक्कै पार्नुपर्छ नत्र छुनु हुन्न । उसले खोजी खोजी मार्छ ।’
उनको यो सांकेतिक ट्वीटमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘गोमन सर्प’ सँग तुुलना गरेको प्रष्टै बुझिन्छ । ‘कि त ओलीको राजीनामा माग्नु हुँदैनथ्यो, मागेपछि छोड्नु हुन्न नत्र कसैको राजनीतिक जीवन सुरक्षित हुँदैन’ भन्ने आसय देखिन्छ ।
कतिपयले नेतृ झाँक्रीको हुर्मत लिने काम सामाजिक सञ्जालमा गरिरहेका छन् । खासगरी ओली समूहका नेता कार्यकर्ताहरुले उनको खेदो खनिरहेका छन् ।
यही लडाईंलाई इङ्गित गर्दै एक प्रयोगकर्ताले प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘डा. केपी ओलीको पार्टीकी नेतृ झाँक्री सामाजिक सञ्जालमा कराइरहनुपरेको छ, पार्टीभित्रको लोकतन्त्र/जनवाद कोमामा पुगेको छ ।’
अर्का युवा नेता डा. विजय पौडेलले पनि बारम्बार ट्वीटरमा हैरानी व्यक्त गरेका छन् । उनले एक ट्वीटमा यस्तो लेखेका छन्, ‘एक त बैठक नै नबस्ने, जसोतसो आयोजना भएको बैठकमा मूल नेताले भाग नलिए पनि हुने, त्यही बैठक पनि सरेको सर्‍यै हुने, ठोेस निर्णय नगरी समाप्त हुने, यस्तो खालको निरीह संचरना कसरी कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समिति हुन सक्दछ ? गाउँघरका सानातिना क्लब पनि यो भन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छन् ।’
युवानेत्री उषाकिरण तिम्सिना प्रत्येक दिनजसो नेताहरुलाई ट्वीटरमा घोचिरहेकी हुन्छिन् । स्थायी समिति बैठक बारम्बार सरेको सन्दर्भमा उनले लेखेकी छन्, ‘कतिपटक बैठक सरेपछि कमरेडहरु अनुहारमा कालो पोतेर सडकमा निस्कनु हुन्छ ?’
मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने ओलीको प्रस्तावबारे उनले अविश्वास गरेकी छन् । तिम्सिना लेख्छिन्, ‘यदि हल्ला सत्य हो भने मंसिरमा महाधिवेशन हुँदैन । ६ महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक त नराख्ने मठाधिशहरुले महाधिवशन गर्छन् भनेर पत्याइन्छ ?’
स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेललाई कुनै समय प्रचण्डकोे अत्यन्त निकट नेता मानिन्थ्यो । अचेल पूर्वमाओवादीहरु गजुरेललाई शंका गर्दछन् । कतै उनी भित्रभित्रै ओलीसँग मिलेका त छैनन् ? तर, गजुरेलका ट्वीटमा असन्तुष्टि र छटपटी नै देखिन्छन् । उनको एक ट्वीट यस्तो छ, ‘अन्यौलको अवस्था लामो रह्यो भने परिणाम सकारात्मक निस्कन सक्दैन । यस्तै सन्दर्भलाई इङ्गित गर्न रात रह्यो, अग्राख पलायो भन्ने गरिएको हुनुपर्दछ ।’
उनले अर्को ट्वीटमा यसरी तितो पोखेका छन्, ‘पुँजीवादीहरु कम्युनिष्टहरुका कतिपय राम्रा कुराको अनुशरण गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याइरहेका छन् । तर हामी कम्युनिष्टहरु आफ्नो क्षमता र आफैंले विकास गरेका राम्रा कुराको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न नसकेर पछि पर्दैछौं । कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक बन्दै गइरहेको छ, यो तीतो यथार्थ हो ।’
अहिले यस्ता सयौं ट्वीटहरु छ्याल्लब्याल्ल छन जसले नेकपा कार्यकर्ताहरुको नेतृत्वप्रतिको रिस अभिव्यक्त गर्दछन् ।